100+ Okwu ọchị nke ị nwere ike ị maghị na ha dị egwu: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
100+ Okwu ọchị ị nwere ike amaghị na ha dị egwu
gbara akwụkwọ Isiokwu by Nhazi ederede TMLT na June 18, 2021
Okwu ọchị na-atọ ụtọ ikwu. Mgbe ị na-eche banyere ya, okwu ụfọdụ dị n’asụsụ Bekee nwere ike ịmasị nke ọma. Na mgbe anyị na-ekwu “na-akpali” anyị pụtara n'ezie dị egwu na wacky. Ma hey, nke ahụ bụ ihe na-eme ha obi ụtọ, nri?
Ndi a chịkọtara okwu na-atọ ọchị na nkọwa ha. Dobe ha n'ime okwu gị kwa ụbọchị ma mee ka ndụ kwa ụbọchị bụrụ ihe ọchị. Tinye okwu ọkacha mmasị gị kachasị amasị gị n'ihe ndị a kwuru!
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ n'anya na-etinye okwu nzuzu na mkparịta ụka gị kwa ụbọchị, ị nwere isi ọma n'ihi na anyị chịkọtara okwu na-atọ ọchị ị nwere ike ịmalite iji taa nke ị nwere ike ịnụtụbeghị.
Were a peek n'okpuru na njikere iji tinye nza nke ọhụrụ na-akpa ọchị okwu gị okwu.
Nwere ike ịnụ ka nne na nna gị ochie jiri okwu ọchị a na-ezo aka na mgbagwoju anya ma ọ bụ mgbagwoju anya.
2. Akpụkpọ ụkwụ
Nke a bụ ndị na-agba ọsọ ọrụ na-eme mgbe ha gbanwere n'etiti ịgba ọsọ na ịgba ọsọ.
3. Mgbe obula
Nke a abụghị typo, ọ pụtara “oge niile” ma ọ bụ “oge niile.”
I nwere ike iche na nke a bụ ụda ụfọdụ, mana ọ bụ n'ezie okwu pụtara "ibé ala."
Can nwere ike iji okwu a mgbe ị na-ekwu maka ọgba aghara.
O di nwute, nke a abughi nri. Kama nke ahụ, ọ bụ otu nta nke imi na-agbasapụ n'imi mmadụ.
Have nwetụla mgbe ị na-eche ihe a na-akpọ akara ejiri maka nkewa na nsogbu mgbakọ na mwepụ? Ugbu a, ịmarala!
Mgbe mmadụ na-egbu egbu, ị nwere ike iji okwu nzuzu kọwaa ha.
Okwu ọchị a bụ okwu ọzọ maka “nche anwụ.”
10. Utu aha
Jiri okwu a dochie okwu a “ichi ochi” ma obu “chia ochi” mgbe ichoro ime ihe mmadu.
11. Anwụrụ ọkụ
Ghara ịghọtahie na okwu ahụ bụ "snicker," a "smicker" pụtara ile anya ịhụnanya nke onye.
Nke a bụ okwu nke pụtara “nnukwute nko.”
13. Anya mmiri
Might nwere ike ịgwa ya onye toro eto kpọọ onye na-eto eto, onye nwere ntụkwasị obi gabigara okwu a jọgburu onwe ya.
"Salopettes" bụ okwu ejiri kọwaa uwe ogologo skị nwere warara nwere eriri ubu.
Nke a na-ezo aka na onye na-ezu ohi akwụkwọ.
Nke a na-akọwa onye na-eri / na-a drinksụ ihe ọ whileụ whileụ mgbe ha na-edina ala - yabụ isi onye ọ bụla nke na-eri nri mgbe ọ na-ele Netflix anya bụ “mmebe iwu.”
Okwu a na-akọwa mmadụ na-agagharị ma na-eme ihe na-abaghị uru.
18. Onye ezi omume
Enwere ike ịkpọ onye ọ bụla na - amụ mkpụrụ akwụkwọ ugbu a - nke a bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara ọ bụla. - Okwu Na-atọ ọchị
Onye ji okwu a n’ahịrị nwere ike ịsị na a ghọgburu ya ime ihe.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka aha anụ ụlọ, ọ bụ okwu pụtara "na-arịa ọrịa mara mma."
Mgbe ịchọrọ ịgafe na ihe juru gị anya, ị nwere ike iji nke a.
Ọ bụrụ na mmadụ na-echegbukarị onwe ya gbasara otu ejiji ha, ị nwere ike ịkpọ ha dịka "anụ ọhịa."
Mba, nke a abughi udiri anumanu, o bu ntuziaka ma putara otu ihe dika ikwu ihe bu ihe ozo.
A na-eji okwu a eme ihe mgbe mmadụ na-enweghị ahụmahụ na ihe, na-ezokarị aka n'iji ịntanetị ma ọ bụ egwuregwu vidiyo.
Ọ bụ ezie na ndị mmadụ nwere ike ịkpọ akara a hashtag (#), ezigbo aha ya bụ "octothorpe."
Nke a bụ mgbe ị na-agwa mmadụ okwu n'ụzọ ị na-achọ ịmasị ha n'ụzọ enyi na ndụ.
Nke a bụ ihe ị ga - akpọ onye na - atụ ụjọ ịmecha ihe ọ bụla.
Emehiela nke a maka mkpụrụedemede Tyra Banks "ịmụmụ ọnụ ọchị." A "smaze" bụ ihe ị ga - enweta mgbe anwụrụ ọkụ na anwụrụ ọkụ jikọtara.
Nke a bụ ụda na-ada ụda, na-ebe ákwá nke bagpipip na-eme. Onye maara?
Nke a bụ mara mma na shortened ụdị nke okwu "mara mma."
Kama ịsị “Ewoo!” i nwere ike ikwu nke a goofy okwu.
Nke a bụ okwu na-atọ ọchị nke pụtara na ihe na-agagharị n'okporo ụzọ na-ezighi ezi / imegharị elekere.
32. Akwara mmanu
Okwu a na-ezo aka n'igwe abụba.
Nke a na - akọwa oke ihe, na - abụkarị nri.
34. Ọmarịcha mma
Nke a enweghị ihe jikọrọ ya na eserese na ihe ọ bụla nwere ịchọ mma yana otu esi chọọ mma mma.
35. Onye a na-egbu anụ ụlọ
A ga - akpọ onye nke mere ochie na - achọghị ka ihe ọ bụla gbasara ọnọdụ ọgbara ọhụrụ. - Okwu Na-atọ ọchị
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka nnukwu nri, ọ pụtara otu ihe ahụ dị ka okwu ahụ “gibberish.”
Nke a bụ okwu nke pụtara "mmiri gbara ọkpụrụkpụ."
Nwere ike iji okwu a mgbe ị na-ekwu maka ịnwe ngwakọta nke ihe dị iche iche.
Nke a na-akọwa ihe dị ka ọ ga-ada.
A na-akpọ onye nwere nsogbu ịme mkpebi- ukwu ma ọ bụ obere - okwu a.
Nke a pụtara na ị gbagwojuru gị anya.
Ma ọ bụghị nke a maara dị ka mkpu ịdọ aka ná ntị.
Oge ọzọ ị nwere afọ mgbu, ị nwere ike iji okwu a.
A na-eji okwu a akọwa asụsụ na-adịghị mma.
Nke a pụtara “ASAP.”
Nke a bụ anụ ọnụ ala.
Anya nke omume adighi mma.
48. Ebum n’uche
A na-eji okwu a mgbe ị na-akọwa otu na-etikọ mkpu ọ joyụ ọnụ.
Isi ihe a na-ezo aka n'iji oge gị.
50. Ogbe ahuru
Nke a bụ ihe a na-akpọ oghere dị na gbọmgbọm ma ọ bụ akpati ị wụsa mmiri mmiri.
Enwere ike ịkpọ onye nzuzu na onye anaghị arụ ọrụ dị ka nke a.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nke a bụ aha ụdị achịcha ọka ndịda.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa ihe dị nro mara mma, jiri nke a.
Otu nwere ike ịsị na ịkpọ onye rụrụ arụ na basketball player n'oge egwuregwu mgbe ha flop bụ a mara mma "namby-pamby" iwu.
Kama ịsị na i nwere “nsị” ma ọ bụ “mkpịsị aka” n’ụlọ gị, ị nwere ike iji okwu a gwa ndị ọzọ na ị nwere obere ihe na-enweghị ezigbo uru.
Nke a abụghị uwe. Kwere ya ma ọ bụ na ọkwaghị, a na-eji ya akọwa ụda ụdaume abụọ mgbe ejikọtara ọnụ, dị ka ụda nke “oy” n'ọ joyụ. - Okwu Ngha
Nke a bụ mkpụrụ okwu ọzọ iji kọwaa mmetụta ọgbụgbọ.
Ga-ahụ ọtụtụ obere osisi ndị a n'Australia na New Zealand.
A ga-eji okwu a kọwaa nwatakịrị na-adịghị mma.
Nke a bụ ahịhịa ogwu nwere isi ifuru nke dị ọfụma.
Nke a bụ okwu Yiddish nke pụtara n'ụzọ pụtara "onye na-anya azụ azụ."
Nke a bụ ihe ị ga - akpọ ngwa nke bụ ama na mbadamba.
Ndo umu nwoke, mana ejiri okwu a mee ihe mgbe i na ekwu okwu banyere nwoke ozo eji eme ya ma obu megharịa ya anya. - Okwu Na-atọ ọchị
'D ga-akpọ onye na-eyikarị uwe elu na uwe ruru unyi a.
Ọ bụ ezie na okwu a dị ka ọ ga-enwe ihe jikọrọ ya na ịchị ọchị, ọ bụ n'ezie okwu maka mma dị ogologo ma dị egwu.
Nwere ike iji nke a mgbe mmadụ na-ekwu okwu enweghị isi.
Nke a bụ ihe ị kpọrọ nkịta bụ ngwakọta nke ugo na pug.
Nope, nke a emebeghị. Ọ bụ ofe eji ntụ ọka, nri anụ ya na ofe.
Nwere ike were anya Jack Sparrow jiri okwu a kọwaa onye otu ya bụ onye nzuzu.
Mgbe mmadụ na-ekwu okwu nzuzu na okwu na-enweghị isi, ị na-eji okwu a.
Ọ bụrụ na ị bụ onye anaghị a alcoholụ mmanya na-aba n'anya, mgbe ahụ, amara gị dị ka "teetotaler"
Nke a bụ okwu ọzọ nke pụtara “ịgba ọsọ.”
Probably nwere ike ghara ịkọwa ya, mana nke a bụ obere bekee ejiri si na mkpokoro mara mma.
Nke a enweghị ihe ọ bụla jikọrọ gị na splin gị na n'ezie ihe ọ bụla metụtara obere fern nke na-eto na nkume na mgbidi.- Okwu ọchị
Nwere ike iji okwu a mgbe ọzọ ị nụrụ oke mkpọtụ.
A na-eji okwu a mgbe ị chọrọ ịkọwa na ihe mmadụ na-ekwu bụ ụgha ma ọ bụ ikwubiga okwu ókè.
Na-eji okwu a mgbe ị na-ezo aka na ihe na-ada ụda ma ọ bụ na-agbagharị.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ikwu na ụjọ tụwara mmadụ, jiri okwu a dochie anya ya.
Nke a bụ obere oge ịse eto site na mgbọrọgwụ nke osisi.
Mgbe ịchefuru ihe akpọrọ, ị nwere ike iji okwu a.
Okwu a di njo nke na odi ka ihe anakpo, ma o na arutu aka n’onye nzuzu na ekwu okwu.
Okwu a na-akọwa itu elu ị na-eme n'ikuku mgbe ị nwere ụta ụkwụ na ụkwụ siri ike.
Nke a enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na inye ezì bat. Ọ bụ okwu ị na-eji mgbe mmadụ kwenyere ihe, dị ka nkwenkwe ụgha, bụ adịgboroja.
Mgbe ịchọrọ iji okwu nke pụtara "enweghị ihe ọ bụla," jiri nke a.
A na-akpọ ọnụ nke onye na-edekọ ihe ma ọ bụ ụdị ọzọ nke ụdị ifufe yiri nke a.
Okwu a nwere ike daa ka nzuzu, mana iji ya kọwaa onye anaghị eme enyi.
Ì nwere ike ikwere na okwu a pụtara “ifufe na-efesi ike n’elu ugwu?”
A na-akpọ ndị bi na Peninsula nke Upper Michigan aha a.
Nke a bụ ngwa T nke a na - eji ewepu mmiri na ala na windo.
Nke a bụ ihe ị ga - akpọ obere ihe ma ọ bụ gadget ma ọ bụrụ na i chefuru ezigbo aha ya.
91. otlọ nkpi
Gaghị ama ya, mana nke a pụtara ibufe ndị njem ma ọ bụ ngwongwo n'etiti ebe abụọ n'otu mba ahụ. - Okwu Na-atọ ọchị
Ọ bụrụ na ihe “amachitere,” ọ pụtara na o nwere ihu edetị nke aka ya ji aka ya.
Ejiri okwu a mee ihe nke ukwuu na 1870 ma bụrụkwa nke na-akọwa ụda na-agwụ ike nke uwe ogologo mere.
Oge ọzọ ị ga-ahụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike iji merie onye ahịa ya na mgbasa ozi, ị nwere ike ịkpọ ha nke a.
Nke a enweghị ihe jikọrọ ya na anụmanụ, kama ọ pụtara na ị diri ihe.
96. Ugba mmiri
Nke a bụ ihe ị kpọrọ onye na-aga n’ihu gị mgbe ị nọ n’etiti igwe mmadụ.
Nke a pụtara otu okwu ahụ dị ka "aghụghọ".
98. Ọsụ ngọngọ
Nke a bu okwu ozo eji ako ihe mmadu.
Nke a apụtaghị na mmadụ abụghị mmadụ ọzọ. Ọ bụ okwu ị na-eji akọwa onye ehichapụrụ n’ihi agwa ọjọọ ya.
Ihe a abụghị ihe nkịtị.
101. Batrachomyomachy - Ime ugwu site na ihe ntanetiri.
102. Cattywampus - Emezighi, mgbe ihe na-adịghị ahazi n'ụzọ ziri ezi.
103. Flibbertigibbet - Flakey, onye na-ekwu okwu gabiga ókè. - Okwu Na-atọ ọchị
104. Quire - Epupụta n'ime ihe odide.
105. Ogba - Suddenlyhapụ na mberede.
106. Billingsgate - Asụsụ siri ike jupụtara na okwu rere ure.
107. Ogbe - Okwu maka mkpọtụ afọ gị na-eme mgbe ọ na-ada ụda.
108. Gardyloo - A dọrọ aka ná ntị tupu mmiri ma ọ bụ ihe mkpofu atụpụ n'elu.
109. Malarkey - Eziokwu.
110. Ratoon - Ome n'ubi akuku.
KWESOMR FOR KWES YOUR YOU G YOU !!!
100 Funny Good Night Ozi, Chọrọ, na Quotes
100 Funny New Year Wishes and Messages for Love On
Saịtị 15 kachasị ewu ewu maka ụmụaka iji lelee katuunu katun na ntanetị na 2020
Ozi mara mma 100 mara mma maka ezigbo Enyi 2021
Ọpụpụ Nke a Ihe 15 Naanị ndị Naijiria ga-eche bụ ihe ọchị
100 Funny Christmas Chọrọ, Ozi, na Quotes
111. Bịa - Ọ bụ akara aka ma ọ bụ ntaramahụhụ mmadụ kwesịrị inweta.
112. Boustrophedon - Kinddị ederede oge ochie nke edere n'aka nri na aka ekpe na aka ekpe gaa na ahịrị ndị ọzọ.
113. Bowyang - Udọ nke na-ejide ogologo ọkpa.
114. Ọrịa ọrịa - Otú ahụ gị si agbatị mgbe ike gwụrụ gị ma ọ bụ ịmị amị.
115. Yarborough - Aka na-esighi ike na nkwekọrịta akwa.
116. Donnybrook - Arụmarụ na-akpata esemokwu.
117. Anencephalous - Enweghị ụbụrụ ma ọ bụ akụkụ ọ bụla.
118. Snickersnee - Nnukwu mma.
119. Sialoquent - Nkeji Gba mmiri mmiri mgbe ị na-ekwu okwu.
120. Xertz - Ụọ mmanya ma ọ bụ iri ngwa ngwa ma ọ bụ anyaukwu.
Ninjigbo121. Onye nzuzu, abaghị uru.
122. Ukwuu - Cudchịkọta ma ọ bụ ịbịaru nso.
123. Godwottery - Styledị okwu ọnụ ma ọ bụ ịkọ ugbo.
124. Gonzo - Editọ nta akụkọ.
125. Obi ụtọ - Oké arụmụka ma ọ bụ nkwenye.
126. Ihe ijuanya - Na-esite na mgbede.
127. Ogba - Okwu Mgbakọ metụtara ụdị ịjụ ịwakpo ọrụ. - Okwu Na-atọ ọchị
128. Cockamamie - Apụghị ikweta.
129. Goombah - Otu agadi, enyi na-echebe ma ọ bụ enyi.
130. Hobbledehoy - Onye na-eto eto, onye ntagide.
131. Ogbugbu - Ihe nzuzu ma ọ bụ ịmị aka.
132. Mgbapu - Eziokwu.
133. Ọrịa-nkewa - ASAP.
134. Mollycoddle - Nkem Osuigwe Iji emeso mmadụ ihe n'ụzọ aghụghọ.
135. Mkpo - Owo emi m issimaha ndidian idem ye ukara.
136. Collop - Iberi nke anụ a roara n'ọkụ.
137. Namby-pamby - Onye na-enweghị ume na obi ike.
138. Ornery - Anụmanụ
139. Pettifogger - Onye ọka iwu dị ala karịa nke nwere omume enyo.
140. Rigmarole - Nkwupụta ogologo, na-agbagha.
141. Collywobbles - Nchegbu na afo queasiness. - Okwu Na-atọ ọchị
142. Shenanigan - Omume ezighi ezi.
143. Ogba - Pụọ ngwa ngwa.
144. Osiwe - Onye na-achọta mmejọ.
145. Snool - Imegbu mmadụ ka o doo onwe ya n'okpuru.
146. Snollygoster - Onye nwere ezi uche na-enweghị ụkpụrụ.
147. Zoanthropy - Onye kwenyere na ha agbanweela anụmanụ.
148. Okpokoro - Ihe dị mfe, onye na-arịa ọrịa mgbe ọ na-a drinkingụ mmanya.
149. Doozy - Ihe dị ịrịba ama, ọ bụghị nkịtị.
150. Igba - Akụkụ azụ ndị a na-atụkarị atụba ma ghara iri ha.
151. Erinaceous - Ihe dị ka hedgehog.
152. Pauciloquent - Onye na-anaghị ekwu ọtụtụ okwu, ma ọ bụ na-adịkarị mkpụmkpụ mgbe ha na-ekwu okwu.
153. Fard - Emebiga ihe ókè.
154. Ikekwe - Nzuzu na enweghị isi. - Okwu Na-atọ ọchị
155. Abibliophobia - Egwu nke iwepụ akwụkwọ ọgụgụ.
156.Bible - Sọftụwia nke na-agbanwe ihe onyonyo.
Udo 157. Bloviate - Ikwu okwu n’ogologo, nke buo ibu.
158. Fuddy-duddy - Onye mere ochie ma ọ bụ na-eme mkpọtụ.
159. Bumbershoot - Nche anwụ.
160. Na-enweghị nkọwa - Iji pawn ihe.
161. Gobbledygook - Asụsụ dị oke nfe na mgbagwoju anya na ọ bụ enweghị nghọta.
162. Troglodyte - Onye bi n'ọgba.
163. Akuko - Entrancezọ mbata ma ọ bụ ụzọ ọpụpụ na ihe nkiri ma ọ bụ egwuregwu.
Asụsụ bekee abụghị nke pụrụ iche ma dịkwa mma? Okwu bụ ihe na-atọ ọchị.
Ọ bụghị naanị n'ihi na mgbe ụfọdụ ha na-eju anya (kwụ n'ahịrị, anyị na-ekwu maka gị) ma ọ bụ nwee mmalite pụrụ iche, mana ọ bụkwa n'ihi na ha dị ezigbo ọcha na-eme ka anyị chịa ọchị. Kedu ihe bụ fartlek? Ma ọ bụ a shivoo?.
Ọfọn, Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgụ ihe ederede a, biko kọọrọ ndị freinds gị, ma chịa ọchị maka ya. I nwekwara ike dobe okwu n’okwu nke kachasị amasị gị.
Ngwa Visa Visa maka ndị Nigeria | Visa njem nlegharị anya, Visa ọrụ
Tinye akwụkwọ maka Media Jobs na Lagos na Spice TV
Sydney na-ekwu okwu onyinye mmụta nna ukwu maka ụmụ akwụkwọ mba ụwa 2021
Ntughari na aku na uba Naijiria; Mmetụta nke Mgbanwe Ọnụego mgbanwe
FULAFIA Diploma Admission Form 2020/2021 Ngwa Oge Oge Ọmụmụ
PTI Post-HND na MSc. Ndepụta nnabata 2019/2020 Oge Adịghị.
Nnyocha nyocha nke nrụgide nke olulu mmiri gbawara agbawa na ọdọ mmiri dị iche iche
Tags: okwu nzuzu, okwu ọchị maka ndi enyi, Okwu ọchị na ụbọchị, okwu ọchị ma ọ bụ ahịrịokwu, okwu na-atọ ọchị iji banye na mkparịta ụka, okwu ọchị na-ekwu aghara aghara, obere okwu na-atọ ọchị, obere okwu na-atọ ọchị iji kwuo
« Etu aga-esi kpochapu oke na ulo nke oma ma zuru oke
Ndị na-edebanye aha ha n’aka ndị na-ede akwụkwọ aha ha bụ 2021/2022 Full PDF List »
BBN 2021 Ndi umuaka ulo - Mata ha
Mmelite mbanye na nchekwa nchekwa obodo 2021 Lee Nchọpụta Ngwa
Portal Mbanye na Portal 2021 na Mmelite Dị Mkpa
Mkpokọta ndị nchekwa obodo www.nscdc.gov.ng 2021 Lee Portal Ngwa
Mkpokọta ndị nchekwa obodo 2021/2022 Tulee Nchịkọta Ngwa NSCDC kachasị ọhụrụ
Citibank Nigeria Limited Recrutment 2021/2022 Lelee Mmelite Ngwa
BBN 2021 Homụ nwoke ibe Ha - Do Maara Eziokwu Banyere Ha?
Portal MTN Nigeria na-ewebata 2021 www.mtnonline.com
MTN Nigeria Recruitment 2021/2022 Portal Ngwa Mpaghara Ugbu a
www.policerecruitment.gov.ng Portal ndị uwe ojii 2021 Hụ Portal Ngwa NPF
Ogige Nkuzi ndi nkuzi nke Lagos Steeti 2021 www.lagosstate.gov.ng
EcoBank Mbanye Ntinye 2021/2022 Portal Application Portal
Statedị Akwụkwọ Ndị Nkuzi Lagos State 2021/2022 SUBEB Mpempe akwụkwọ
FPI HND na Ọbá akwụkwọ & Science Admission Form 2021/2022 Oge
UNIOSUN Admission Screening Form 2021/2022 Oge Ọmụmụ
ACEONDO Ọmụmụ kalenda 2021/2022 Mmemme Oge Ọmụmụ
ACEONDO Revised Mmụta Kalịnda 2021/2022 Oge Ọmụmụ
UNIOSUN Post UTME 2021/2022 Forming Screen, Eligibility na Oge ikpebi
UNIOSUN Post UTME / DE 2021dị 2022/XNUMX Oge Nnyocha Portal Oge